Home Teeth Whitening | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "ilkaha guriga caddeeyo"
Sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha isticmaalaya guriga caddeeyo habka
In labada nin qurux badan dhaldhalaalaan ilkaha waa riyo qof kasta inta aad garan sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Waxa kale oo aad samayn kartaa ilkaha dhalaal iyo caddaan leh qalabka ilkaha caddeeyo ama daaweynta ilkaha. Si kastaba ha ahaatee, ilkaha caddeeyo soo socda mid ka mid ah hababka, kuwaas oo sida caadiga ah kharash aad u sarreeya in inta badan dadka aan iska bixin karin. Oo weliba, qaababkani had iyo jeer ma bixiyaan ugu fiican iyo natiijada ugu jeclaystay. ka ilkaha ka badan-the-counter xirmooyinka caddeeyo iyo qalliin ilkaha qaali reebo, aad mid leedahay doorasho dheeraad ah sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha kaa caawinaya in aad hesho si tartib-free, Xiddig lfi lagana ilkaha cad oo aan gelinaya wax rar dhaqaale aad ku. in la ogaado Waxaad awoodi doontaa sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha adiga oo isticmaalaya ilkaha guriga caddeeyo habka. ilkaha Home caddeeyo habab inta badan wax ku ool ah oo dheeraad ah shaqeeyaan ka badan hababka kale. Waxa intaa dheer in in, farsamooyinka guriga ku salaysan aad lacag aad u yar inaad hubaal awoodin. Hoos waxaa ku qoran siyaabaha sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha in kharash la awoodi karo.
Baking soda is available in the kitchen of almost every house and helps sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Dadka isticmaali baking soda sida tastemaker a. baking soda sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin nadiifinta. Waa wax ku ool ah ka shaqeeyaa inay ka qaboojiyaha ka saar ur pungent. Waxaad isticmaali kartaa baking soda nadiifinta ilkaha. Dubista soda waa hadal haynta in dabeecadda iyo habkaani kaa caawinaysaa in aad si tartib ah ka dusha daahii dibadda ee ilkahaaga ka saari doonaa. Waayo caddeeyo ilig, qaado qaado ee soodhaha, Dhibic yar oo biyo ah iyo burush jilicsan qoyan-bristled. Qaado soda ku qoran oo timir ah iyo dar dhibcood oo biyo ah, waxa uu si ay u sameeyaan, Jinka ah waxaa ka mid ah. Hadda waa inuu dhex geliyaa caday galay Jinka iyo cadaydo ilkahaaga. Waxaad u soo raaci kartaa habkan sida ugu badan ee hal mar todobaad kasta.
Waxaa jira qaar ka mid ah miraha in caawin sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha; laakiin strawberries shaqeeyaan ugu fiican si ay u caddayn ilkaha. Waa mid ka mid ah ugu sahlan ee, ilkaha guriga wax ku ool ah oo ka raqiisan xirmooyinka caddeeyo. Strawberry ka kooban malic acid sida qayb firfircoon. Tani waxay qayb ka caawisaa organic on sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha si loo dabciyo Wasaqda ka dusha sare ee ilkaha. Si aad natiijo wanaagsan, waxaad isticmaali kartaa baking soda oo ay la socdaan strawberries. Iska yaree mid strawberry dhexdhexaad ah u bislaaday googooyaa yar isla markaana qaado xubnihii baaquli. Ka dibna ku dar qaado kala bar soda midhaha iyo Mash isku dar ah oo la fargeeto ah in ay si fiican u dhex gali ilaa uu helo joogta ah pulpy. Hadda codsan walaaqdey on ilkaha buraashka iyo sugto dhowr daqiiqo. Markaas si fiican u biyo raaci afkaaga biyo Caraabaah. Waxaad taas samayn kartaa hal mar todobaad kasta.
Tani waa fursad kale oo wanaagsan oo sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha guriga. In guryo badan, waxaa loo isticmaalaa in jeermiska jeexan iyo xagashada Ciyaalle. Waxaa loo isticmaali karaa sida an whitener ilkaha u fiican. cadeyga Most qaali ku jira haydarojiin sida qayb weyn. Waxaad isticmaali kartaa sida dawo luqluqasho iyo sidoo kale ilkaha whitener. Qaado koob afaraad hal of haydarojiin afkaaga galay oo hadaaqo ee ku saabsan hal daqiiqo. Markaas afkaaga biyo raaci si fiican u biyo Caraabaah. Caday ilkaha ka dib markii la isticmaalayo haydarojiin si aad u hesho saamayn wanaagsan. Waxaad isticmaali kartaa haydarojiin mar maalin kasta si aad u hesho natiijada ugu filayo.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 4, 2016 at 10:24 AM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: ilkaha guriga caddeeyo, sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha, caddeeya aanu u caddayn ilkaha